Warshadaha Shiinaha iyo alaab -qeybiyeyaasha gudaha iyo dibadda | Tianhongyi
Soo -kiciyaha Tianhongyi wuxuu leeyahay muuqaal dhalaalaya oo jilicsan, qaab xarrago leh iyo khadad siman. Buug gacmeedyo guur-guura oo aad u khafiif ah oo midab leh iyo muraayado dhinaca galaas ah oo xoog badan ayaa ka dhigaya soo-kiciyaha mid raaxo iyo xarrago leh. Baaskiiluhu wuxuu ka kooban yahay waddo jaranjaro ah iyo gacmo -gacmeedyada labada dhinac. Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah tallaabooyin, silsilado goos goos ah iyo jaranjarooyin, nidaamyada tareenka hagaha, hababka gudbinta ugu weyn (oo ay ku jiraan matoorrada, aaladaha dhimista, bareegyada iyo xiriiriyeyaasha gudbinta dhexe, iwm.), Dunmiiqa wadista, iyo waddooyinka jaranjarada. Aaladda kacsanaanta, nidaamka gacan -qabashada, saxanka shanlada, jir -bararka iyo nidaamka korontada, iwm. Tallaabooyinku waxay u socdaan si toos ah albaabka rakaabka (rakaabku si ay jaranjarada u fuulaan), ka dibna si tartiib tartiib ah ayay u sameeyaan tallaabooyin; meel u dhow meesha laga baxo, tallaabooyinku si tartiib tartiib ah ayay u baaba'aan, oo tallaabooyinku mar kale ayay u socdaan si siman. Gelitaanka iyo ka bixitaanka armrest -ka waxaa lagu qalabeeyay nalalka tilmaameha jihada socda si loo muujiyo jihada hawlgalka iyo calaamadaha muujinta xarriijinta mamnuuca, iyo badbaadada rakaabka waxaa lagu xaqiijin karaa hawlgalka tilmaanta ama xarigga mamnuucidda. Waxaa si weyn loogu adeegsan karaa meelaha dadku ku badan yihiin sida saldhigyada, dekadaha, suuqyada wax laga iibsado, garoomada diyaaradaha iyo tareenada dhulka hoostiisa mara.
1. Kalkaaliye keli ah
Isticmaalka jaranjarada kaliya ee isku xirta laba heer. Waxay ku habboon tahay socodka rakaabka inta badan jihada socodka dhismaha, wuxuu sameyn karaa hagaajin dabacsan si loo daboolo baahiyaha socodka rakaabka (tusaale ahaan: subaxda, ilaa fiidka)
2. Qaab-dhismeed joogto ah (taraafikada hal mar ah)
Qabanqaabadan waxaa inta badan loo adeegsadaa dukaamada waaweyn ee yaryar, si si joogto ah loogu helo saddex dabaq oo iib ah. Qabanqaabadani waxay ka badan tahay booska uu u baahan yahay qabanqaabada kala -guurka.
3. Habayntii hakad gashay
Qabanqaabadani waxay dhib u keeni doontaa rakaabka, laakiin waxay faa'iido u tahay milkiilayaasha suuqyada wax laga iibsado, sababtoo ah xagga sare ama xagga hoose ee soo -kiciyaha iyo masaafada u dhaxaysa wareejinta waxay u badan tahay inay u oggolaato macaamiisha inay arkaan bandhigyo xayeysiis oo si gaar ah loo habeeyay.
4. Isbarbar-dhigga joojinta joogtada ah (taraafikada labada dhinac)
Nidaamkan waxaa inta badan loo adeegsadaa socodka rakaabka ee suuqyada waaweyn iyo tas -hiilaadka gaadiidka dadweynaha. Marka ay jiraan saddex ama in ka badan saddex kor -u -qaadis otomaatig ah, waa inay suurtogal tahay in la beddelo jihada dhaqdhaqaaqa iyadoo la eegayo socodka rakaabka. Qabanqaabadani waa mid dhaqaale badan, maadaama aan loo baahnayn is -dhex yaac gudaha ah.
Hore: Golaha Xakamaynta Boqortooyada Ayaa Ku Haboon Wiishka Jiida
Xiga: Wiishka Panoramic oo leh Codsi Ballaadhan iyo Ammaan Sare